Sapanca’lı Kadınların Teleferik Direnişi – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaCable Car Resiliance ee Haweenka Sapanca
15 / 11 / 2019 54 Sakarya, GUUD, Gobolka Marmara, TURKEY, TELPHER
adkeysiga xargaha ee haweenka wadhafka jiifa
Adkeysiga Cable Car Reserve of Haweenka Sapanca; Mashruuca gawaarida fiilada, kaas oo ka bilowda Degmada Kırkpınar, wuxuu gaarayaa mitir 1400 wuxuuna gaarayaa aagga duurka ah ee Mahmudiye İncebel. In ka badan geedaha 500 ayaa loo beddeli doonaa mashruuca. Dhirta qaar waa la gooyn doonaa.
JamhuuriyaddaSida uu sheegayo Hazal Ocak, ”Dadka deggan degmada Kırkpınar ee Sapanca ayaa muddo bilooyin ah ka dagaallamayay mashruuca gaadhiga fiilada. Aagga ay ku taallo saldhigga ugu sarreeya ee gawaarida fiilooyinka, waxaa jiri doona tas-hiilaad sida Xanjada 30, maqaayadaha dalka iyo qaxwada dalka. Xarumahan waxaa dhisi doona shirkadda halka 25 ay shaqeyn doonto sanadka. Meesha la dhigto waxaa ku yaal baarkin. Hawshan, teendhooyinka dadka degan waxaa lagu tuuray bartamaha wadada iyaga oo adeegsanaya ereyadooda, oo naftooda ku waayey halka dhirtii la daadiyay. Fatma Tıknas, 65, ayaa yidhi, üler Way dileen maalintaas laakiin uma dhiman doonno geedahan, gabadhayda. Ma taqaanaa inta sano ee ay dhirtan dhirtaas sii baxaan?
Qandaraaska mashruuca xarig-isweydaarsiga ee degmada Sapanca waxaa la sameeyay bishii Agoosto ee 2018. Mashruuca Teleferic, oo ka bilaabay Kırkpınar Neighborhood, waxaa laga helay Bursa Teleferik AŞ iyadoo leh sanadka cusub ee 25 oo ah qaab dhismeed lagu wareejinayo. Agaasinka Degmooyinka ee Deegaanka iyo Magaalooyinka waa laga saaray mashruuca "Qiimaynta Saamaynta Deegaanka".
Waxaan aadeynaa teendhadii ay dejisay qeybta hoose ee baabuurka fiilada si aan u aragno halganka dadka deggan ay ka soo horjeedaan mashruuca. In kasta oo xaafada Kırkpınar ay ku hareereysan yihiin tuullooyin raaxo leh, haddana dadka tuuladu wali waxay ku nool yihiin guryahoodii hore. Markii aan gaarno teendhada, haweenka xaafadaha ayaa na salaamaya. Dadka daggan gobolka ayaa ku dhejiyay cinwaan ah hogaamiyaha weyn Mustafa Kemal Atatürk dhinaca teendhada. Calaamadda Alt Post ee Goobta Shilalka Musiibada ”ayaa ku dhegan dhulka halkaas laga dhisay xarun-hoosaadka. Qeyb ka mid ah dhulka waxaa shardi ahaan ugu deeqay dadka tuulada si ay u sii ahaadaan meel cagaaran 1945, laakiin hadda dhirtu waa la jaray mashruucu.
Marka hore waxaan ku bilaabeynaa wadahadalka anaga oo weydiinay Fatma Tıknas, 65, oo ku saabsan sawirka Atatürk. Tıknas wuxuu yidhi, “Atatürk wuxuu ahaa nin qiimeeya dhulka, Immisa shuhadad ah ayuu Atatürk u bixiyay dhulkii mitirka 1? Haddii aan hadda nabad ku noolaanno, waxaa mahad iska leh Atatürk. Dagaaladaas laguma aysan guuleysan naftooda. Way guuleysteen oo la dirireen, waxay bilaabeen cunitaan. Marka maxay helayaan gooyaan dhirkan oo nooga tagayaan oksijiin la'aan?
'Ma seexan karo'
Hamide Ceylan, 78, wuxuu ku sugnaa tuuladan tan iyo 17. Gabadhaan, maahan talaabo noo socoto, söz wuu bilaabayaa. Ne ስሜ maxaad dareentay markii dhirtu kala baxayaan? Sorun wuxuu yidhi, waxaan dareemay inaan soo baxayo. Geedku wuxuu kobcaa sanadkii hal mar sanadkii 20. Waxaan halkaan u joognaa dhamaadka .. Sabriye Tatan, 64-sano jir, kaliya wuxuu u jiraa 12 mitir oo kaliya masaafada hoose ee mashruuca gawaarida fiilada. Tantan 40 wuxuu cadeeyay inuu arkay afar jibbaaran mudo sanado ah wuxuuna leeyahay beri Ma seexan karno habeenkii, ma cuni karno tan iyo markii mashruucu billowday. Hüsamettin Koçlu, Madaxweynaha Deegaanka Kırkpınar iyo Naadiga Ciyaaraha Dibadda, 57, ayaa yiri, Ourz Hadafkeenu waa inaan ilaalinno cagaaran. Ma aaminsani inay jiri doonaan dalxiis ahaan baabuurka fiilada leh, ayuu yidhi.
Teendhooyinka kadib, waxaan u leexanay aaga duurka iyadoo gawaarida dhulka la raacayo wadada mashruuca gawaarida fiilada. Inta lagu gudajiro, harada Sapanca Lake waxay u muuqataa sida dhirirku u sii kordhayo geedaha dheer. Halkaan waxaan cod-qaade u gaarsiinaa deganaha Alper Kesen:
"Burburinta halkan ma aha wax aan dambi lahayn sida aan soo sheegnay. Uma muuqato wax dhab ah in geedka 508 laga saari doono. Waxaa sidoo kale la sheegay in markii ulaha aagaga xargaha la beeran doono, oo kaliya geedaha lugaha lugaha la jari doono. Sida ku xusan qawaaniinta gawaarida xarkaha ee 2009, aagga gawaarida fiilada korantada iyo kuwa sida xamuulka nooca fiilooyinka ku dhaafayaa ay qasab tahay inay noqdaan aag la heli karo. Marka arrimahan oo dhan la tixgeliyo, waxay ka soo horjeedaa dabeecadda maqaalka in la sameeyo arrintan iyada oo aan la jarin geedaha.
MADAXWEYNAHA ÖZEN: TAYO BADAN OO LAGUUGU JIRO
Isaga oo lahadlaya wargeyskeena, Duqa Sapanca Özcan Özen wuxuu siiyay macluumaad kusaabsan mashruuca. Özen wuxuu difaacay mashruucan wuxuuna yiri: aayada oo la raacayo heshiiska, shirkadda waxay xaq u yeelan doontaa inay isticmaasho 25 muddo sannad ah. Intaa waxaa dheer, Dowladda Sapanca ugu yaraan kun rodol sanadkii, xitaa haddii shirkaddu bixin doonto lacagta 800. 25 wuxuu sii joogi doonaa shirkadda muddo sannado ah. 25 in la hawlgeliyo sanado. 25 ayaa noo keeni doonta aagga annaga sanado kadib. Xaqiiqdii, waa wax aad u wanaagsan marka loo eego dalxiiska in gaadhiga fiilada loo dhigo Sapancamkeena. ” Özen wuxuu cadeeyay in geedka 508 laga saari doono barta lagana beeri doono meel kale oo duurka ah. Markii aan weydiinnay tirada geedaha loogu jari doono cagaha xarkaha, Özen wuxuu ku jawaabay: ağaç Geedka kaliya ayaa loo gooyn doonaa cagaha 2, kaasoo aad u yar ”. Waxaa loo duubay in geedka 14 loo gooyn doono lugaha gawaarida fiilooyinka.
'MA BAAHANAYNA MASHRUUCKA'
75-sano jir Hidayet Ceylan sidoo kale wuxuu ku dhashay Kırkpınarlı. Wuxuu ku celceliyay inaysan dooneynin mashruuca gawaarida fiilada korontada wuxuuna yiri, 'Waa ay naga kaxeynayaan halkan ilaa halkan sida reer guuraaga'. Gudaha ayaa layga garaacay inta dhirtu go'day. Waan xanuunsaday, daawo baan qaatay, waan imid. Waan ka xunnahay. Hadda geedkii 3 ayaa la kala diray. Maxaa dhici doona berrito markii kuwa kale la wareego? Annaguna, buurta uma kici karno, oon duurka u gooyn karno. Haddii aan gooynno geed si aan uga sameysanno geed go'an ah, way na qabsadaan ”.
Salim Aydin, Wakiilka Gobolka ee Sakarya Wakiilka Rugta injineerinka farsamada isagoo matalaya qeybaha TMMOB, wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay warbixinta farsamada ee ay u diyaariyeen mashruuca. Aydın wuxuu yiri, “Ujeedadeena ah inaan ka tagno dhulkeenna oo ay ka wareegeen awowayaasheenna iyagoo aad ugu baahan K longrkpınar qurux badan iyo Mahmudiye carruurteenna ayaa la isku dayayaa inay ka adkaato heshiiska kirada ee Degmooyinka Sapanca iyo Bursa Teleferik AŞ. Mashruucu ma lahan warbixin EIA (togan / negative). In kasta oo ay taasi jirto, bixinta ruqsadaha dhismaha iyo bilaabida dhismaha waa dambi sharciga waafaqsan. Marxaladda koowaad, ku dhawaad ​​400 kun oo geed oo madow ah, geed loo yaqaan 'scotchine geed', beech, chestnut iyo noocyada hornbeam ayaa laga goyn doonaa aagga 'khadaka gawaarida kaliya' waxaa loo xisaabiyaa inay tahay kun mitir 5. Hoyga, xarumaha dalxiiska, xarumaha taliska iyo xasuuqan ayaa gaari kara ilaa kun 20. Sanadaha soo socda, sida qaybaha kale ee Sapanca, aagga waxaa loo furi doonaa dib-u-dhiska iyadoo la taaban karo uu kordhin doono hal waqti oo dheeri ah.
10 iska caabbinta shaqaalaha Alarko ee goobta dhismaha tareenka Beeshiktaş. maalintii
YHT'IN SAPANCA'DI CHOICE ISTICMAALAYA
Meelaha lagu hayo Sapanca ee loogu talagalay YHT ayaa noqday mid cad
Qalabaynta isbeddelka ee khadka YHT waxaa lagu gubay gudaha Sapanca
Cimilada sugitaanka ee Sapanca
Dumarka Cable-ka ee Deegaanka Denizli ee 8 Mart Free
Hooyooyinka Rizeli waxay ficil ku sameeyaan xiritaanka wadooyinka
TÜVASAŞ oo soo dhaweysay haweenka AK Parti
Saldhigga keydka gawaarida ee Sapanca
Iska caabbinta Gawaarida Sapanca Cable
Xallinta Jid-goynta Dumarka leh Shakaalka